Tonizia: Lehibenà Foibem-pahitalavitra Enjehana Fa Nandefa Ny “Persepolis” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2012 7:34 GMT
Ny fisehoana ao anatin'ilay lahatsary dia mampiseho an'Andriamanitra mitsidika amin'ny alalan'ny nofy sy maka n y endrik'olombelona. Niteraka hatezerana maro ilay nandefasana azy ary nisy ny fametraham-pitoriana nataon'ireo mpisolovava 144 sy ny hafa. Efa nahemotra matetika ilay fitsarana, saingy hoe havoaka ny 3 May ny didy – izay Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety. Raha voaheloka i Karoui dia hiatrika famonjàna telo taona an-tranomaizina.
Persepolis dia nalefa indrindra tamin'ny fotoana mitovy izay nahazoan'i Ennahda ny seza be indrindra tao amin'ny parlemanta, ary dia noraisin'ny maro ho toy ny fanambaràna ara-politika mampifandray an'i Tonizia sy Iran izany, sady fampitandremana ho an'ny Toniziana mba “ho tony sy ho mailo hatrany”.
Nabil Karoui miresaka amin'ireo mpanao gazety teo anoloan'ny tranon'ny fitsarana tao Tunis. Sary avy amin'ny machhad.com (CC BY-NC-ND 3.0).
Tanaty lahatsoratra iray tam-bilaogy nitondra ny lohateny hoe “Fitsarana an'i Nessma: Soa Fa Tsy Mahafaty Ny Henatra” [fr], ilay bilaogera sady mafàna fo, Lina Ben Mhenni, dia nitondra fanamarihana momba ny fizotry ny fitsarana :
Raja Haj Mansour no mpisolovava voalohany tamin'ireo mpitory nitondra fanazavàna mahatsikaiky izay nanazavàny fa in-telo tsy nahita tory ny zanany lahy ataorian'ny nijereny ilay lahatsary “Persepolis”, ary izy no nandrisika azy hitory an'i Nabil Karoui. Avy amin'izany no nahatonga ireo mpisolovava hafa handroso tohan-kevitra mendrika ny fotoana Fahagola.
Myriam Meziou nivazivazy hoe:
Tratry ny olana ara-pihetseham-po ny zanakalahin'i Raja Mansour satria nahita ny Persepolis!!!! Inona no hanjo azy raha toa ka ny lahatsary vetaveta voalohany nataony no hitany? #nessma
Zeineb Turki, mpitsabo sady mpanao politika, dia nanoratra hoe :
Tsara ny ampahatsiahivana fa mikasika ny fitsaràna an'i #nessma na ny an'i #Persepolis izy ity fa mikasika ny fahalalahana maneho hevitra
Avy any Paris, Anissa B. nibitsika hoe :
@beautifultango7: Didy navoaka androany ho an'ny fitsarana ny #Persepolis. Andran-tsira ho an'ny fahalalahana miteny eto #Tunisia. #NessmaTV
Ity lahatsary manaraka ity, avy amin'ny Nawaat dia manasongadina hetsi-panoherana ny fandefasana an'ilay Persepolis: